Indlu entsha yobunewunewu kunye nendlu ezolileyo enegadi
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguBernhard
Indlu entsha kraca ecandekileyo ibekwe kufutshane nevenkile enkulu "Lõunakeskus", isikhululo sebhasi kunye nesibhedlele. Indlu ibekwe kwindawo eyaziwayo yaseTammellin (ezolileyo), iikhilomitha ezi-3 ukusuka kwidolophu endala yaseTartu. Inxalenye yendlu enamagumbi angama-4.5 inobushushu obuphantsi komhlaba, ishawari yemvula, umatshini wokuhlamba omtsha kraca, isomisi, umatshini wekofu weNespresso, itoaster kunye nesimbo sefanitshala yaseScandinavia kunye nendlu yangasese yeendwendwe enye kunye negumbi lokuhlambela elikhulu kakhulu. Umgangatho weParquet kuzo zonke iindawo zokuhlala.
Isiqingatha sendlu kwisitayile saseScandinavia sinefenitshala ye-oki, iTV enkulu yescreen esicaba, itafile enkulu yokutyela ye-oki kunye nebhedi yesofa. Indlu ine-Wi-Fi enesantya esiphezulu, iindawo zokupaka kunye negadi enkulu enethafa.
55" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-HBO Max, I-Netflix
Indawo ezolileyo yosapho enezindlu ezintsha. Idolophu endala yaseTartu ikumgama oziikhilomitha ezi-3 kuphela. Isikhululo sebhasi sikufuphi nje. Isibhedlele kunye nevenkile enkulu yimizuzu emi-3 kuphela ngemoto. ITammelinn yindawo yokuhlala efunwayo eTartu.
URena ukhathalela ukucoca kunye nempahla/izitshixo. Uyindawo yakho yokuqala yokunxibelelana ngemibuzo.